Dhaqaalahaaga hawlgabku wuxuu ka kooban yahay dhawr qaybood | Pensionsmyndigheten
Dhaqaalahaaga hawlgabku wuxuu ka kooban yahay dhawr qaybood
Lacagta adiga lagu siindoonaa waxay ka kala imankartaa dhowr meelood. Haddii aad adigu ka shaqayn jirtay oo aad deggenaan jirtay wadanka Iswiidhan waxa markaa lagu siinayaa lacagta guud ee dadka hawlgabka ah la siiyo taas oo ka imanaysa dawlada waxaanay ku salaysan tahay dhaqaalihii ku soo gelijiray ee aad canshuurta ka bixinjirtay. Waxa kaloo lagu siinayaa lacag la yiraahdo lacagta hawlgabka shaqada (tjänstpension) waa lacag lagu kabo lacagta guud ee la bixiyo waxaanay ka timaadaa qofkii ama shirkadii aad u shaqayn jirtay (arbetsgivare) iyo lacagtii adiga kaydka kuu ahayd waa lacag aad adigu si gooniya u dhigatay.
Lacagta hawlgabka guud ee dawlada ka timaada
Lacagta hawlgabka guud ee dawlada ka timaada waxa maamusha Hy’adda dawlada ee qaabilsan lacagta hawlgabka (Pensionsmyndigheten). Waxaanay ka kala kooban tahay dakhliga hawlgabka (inkomstpension) iyo lacagta joogtada ah ee caymiska hawlgabka (premiepension) labaduna waxay ku salaysan yihiin dhaqaalihii ama dakhligii ku soo gelijiray. Qaybo kale oo lacago ah ayaa xitaa ku jira lacagta guud ee hawlgabka (allmänna pensionen), waxaanay ku xidhan tahay wakhtigii aad dhalatay ama haddii uu dhaqaalahaagu hoosayn jiray ama haddii aanad lahaan jirin wax dhaqaale ahb haba yaartee.
lacagta hawlgabka shaqada (tjänstpension) ee timaada shaqo bixiyahaagii (arbetsgivare)
Dadka inta badani waxay helidoonaan lacag hawlgab ah oo uga timaada shaqo bixiyihiisii hore ee uu u shaqan jiray. Haddii aad meelo badan ka kala shaqayn jirtay waxaad markaa ka kala heleysaa lacago hawlgabyo ah waxaanay kaaga kala imanaysaa shirkadaha qaabilsan adeega lacagaha hawlgabyada (tjänstepensionsbolag)
Lacagta aad adigu iskaa kaydsatay
Waxaad kaloo adigu si khaas kuu ah bangiyada ama shirkadaha caymisyada ugu kaydsankrtaa lacago haddii aad adigu doonaysid. Waa lacag aad adigu si gaar kuugu ah u dhigankartid.